~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: February 2011
~~~ ကြိုကြိုတင်တင် ပူပန်နေလည်း တွေ့ရမဲ့အဖြစ်တွေ... မပြောင်းလဲနိုင်... ဘာကိုမဆို ရင်ဆိုင်ဖို့ပဲ စဉ်းစားထားလိုက်တာ... တို့စိတ်ချမ်းသာမယ်။ တွေဝေနေရင် အချိန်ကုန်ရုံပဲ ဘာမှ မထူးဘူးကွယ်.... ဘဝကို ရပ်ဖို့ နည်းတွေမရှိ။ ကံကြမ္မာကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ တို့လှုပ်ရှားကြမယ်။ ယုံကြည်ခြေတစ်လှမ်း ခြေတစ်လှမ်း~~~
အဆိုတော် တင်ဇာမော်ရဲ့သီချင်းလေးပါ။ ဒီသီချင်းက ကျမ စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့အခါတိုင်း အားပြန်တင်းဖို့ကြိုးစားတိုင်း နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးပါ။ သီချင်းစာသားလေးတွေက တကယ်ကို စိတ်တက်ကြွစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နားထောင်မိတိုင်း တကယ် စိတ်ထဲမှာတွေးမိတာက သီချင်းခေါင်းစဉ်လေးပါ။ "ပထမခြေလှမ်း"တဲ့။
ဒီ "ပထမခြေလှမ်း"ဆိုတဲ့ပို့(စ်)လေးကို ရေးချင်နေတာ ကြာပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ အားရက်ရတာနဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါဦး။
ပထမခြေလှမ်းဆိုတာ မစခင်မှာ အရေးကြီးတာနှစ်ခု ရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုအရင်ဦးဆုံး ချမှတ်ဖို့ပါ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆိုတာက ကိုယ်.. ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကို ချမှတ်ပေးတဲ့အရာဆိုတော့ သူရှိမှ ပထမခြေလှမ်းဆိုတာ ရှိမှာပါ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ချတဲ့နေရာမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာက....
career (ဘယ်လို အလုပ်အကိုင်မျိုးကို လုပ်မလဲ)၊
attitude (ဘယ်လိုရှုထောင့်ကနေ ကြည့်မလဲ၊ ဘယ်လို အမြင်နဲ့ကြည့်မလဲ)၊
period (ဘယ်လောက်ကာလအတွင်းမှာ ပြီးဆုံးအောင်လုပ်မလဲ.. ရေတိုရည်မှန်းချက်လား... ရေလတ်ရည်မှန်းချက်လား.... ရေရှည်ရည်မှန်းချက်လား)၊
way (ဘယ်လိုရောက်အောင် ကြိုးစားမလဲ)၊
social involvement(ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲ) .....ဒါတွေပါ စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
အဲ... ပန်းတိုင်ကို ချပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဒုတိယအနေနဲ့က တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာဖို့ စံပေတံတစ်ခု ရှိရပါမယ်။ ကိုယ် ဘယ်လမ်းကိုသွားမယ်မှန်းလည်းမသိ၊ သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာလည်း တိုးတက်မှုရှိမရှိကို တိုင်းတာပေးမဲ့အရာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလူဟာ လမ်းပျောက်မှာ သေချာပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုရှိမှ ပထမခြေလှမ်းကို စလှမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ခုကို ချမှတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ "အဆိုးမြင်ခြင်း (Negative thinking)"တွေကို ဖျောက်လိုက်ဖို့ပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အဲ့ဒီ အဆိုးမြင်ခြင်းက ကျမတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ ယတ္ထာဘူတာကျကျ တွေးခေါ်ပြုမူမှု၊ လုပ်ကိုင်နိုင်မှုတွေကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလို့ပါပဲ။
အဆိုးမြင်ခြင်းတွေကို ဖျောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ပထမခြေလှမ်းကို ယုံယုံကြည်ကြည်၊ သတ္တိရှိရှိနဲ့စပြီး ဇွဲရှိရှိနဲ့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင် သွားနိုင်ပြီလို့ ကျမထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ ယုံကြည်ချက်၊ ဇွဲလုံ့လတို့ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင် .... အဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ်သဘောထားတွေ (ဒေါသ၊ ဝမ်းနည်းအားငယ်မှု၊ အချစ်၊ အမုန်း၊ သူများကိုအားကျခြင်း၊ မနာလိုခြင်းတွေ....) မရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။
"တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံ ဘယ်ရွေ့ မလဲ" တဲ့။
ဒီစကားပုံလေးတွေက အလကားသက်သက် ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရည်ရွယ်တဲ့လမ်းက ဘယ်လောက်ဝေးနေပါစေ... မကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်၊ မကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုဖျောက်ပြီး ယုံကြည်ချက်၊ ဇွဲလုံ့လတို့နဲ့အတူ လျှောက်ရင် ပန်းတိုင်ဆိုတာ အသေအချာရောက်ရမှာပဲပေ့ါ...
1. "ပထမခြေလှမ်း" သီချင်း By Tin Zar Maw
28th Feb 2011 (6:41PM)
Posted by witch83 at 4:56 PM2comments:
Labels: စိတ်အာဟာရ, သီချင်း, ရေးမိသမျှ
လစဉ်လတိုင်းရဲ့ (၁၄)ရက်နေ့လေးတွေမှာ အထိမ်းအမှတ်ပွဲလေးတွေ ရှိကြတယ်တဲ့။ ကိုရီးယားလူမျိုးတွေရဲ့ အလေ့လို့ သိရပါတယ်။ ချစ်သူ/လက်တွဲဖော် ရှိရှိ မရှိရှိအချစ်ဆိုတာကလည်း လူတွေနဲ့ ကင်းနိုင်ကြတဲ့အရာ မဟုတ်တော့လည်း ဒီလို အထိမ်းအမှတ်လေးတွေရှိတာ မဆန်းဘူး ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အချစ်နဲ့မကင်းနိုင်တဲ့ ပုထုဇဉ်လူသားတွေအတွက် လစဉ်လတိုင်းရဲ့ (၁၄)ရက်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပပုံလေးတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ :)
ဇန်နဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့ (Diary Day)
နှစ်သစ်တစ်ခုရဲ့အစပိုင်းလဖြစ်တဲ့အတွက်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အပြန်အလှန်ချစ်စာလေးတွေရေးဖို့ဒိုင်ယာရီလက်ဆောင်လေးရယ်၊ ပန်းခြင်းလေးတွေကို ပေးကြပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့ (Valentine's Day)
ချစ်သူများနေ့လို့ ကမ္ဘာတဝှမ်း သိကြတဲ့နေ့လေးပေါ့။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုချောကလက်လေးတွေ၊ အရုပ်လှလှလေးတွေ၊ souvineir လှလှလေးတွေ နဲ့နှင်းဆီပန်းလှလှလေးတွေ ပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ချစ်သူများအတွက်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ထူးခြားတဲ့ အမှတ်တရတဲ့နေ့ရက်ကလေးပါ။ ကိုရီးယားမှာတော့ မိန်းကလေးတွေကသာ သူတို့ချစ်တဲ့ကောင်လေးတွေကို ချောကလက်ပေးရပါသတဲ့။
မတ်လ (၁၄)ရက်နေ့ (White Day)
ယောကျာ်းလေးတွေက သူတို့ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူကို သကြားလုံး၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်သက်ရာလက်ဆောင်လေးတွေကို မိန်းကလေးကို ပေးကြတာပါ။
ဧပြီလ (၁၄)ရက်နေ့ (Black Day)
Black Dayတဲ့။ အနက်ရောင်နေ့လို့ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရမယ် ထင်တယ်နော်။ ချစ်သူမရှိတဲ့ တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေအတွက်ပါတဲ့။ တောင်ကိုရီးယားမှာ ချစ်သူစုံတွဲမရှိကြတဲ့သူအချင်းချင်း အတူတူသွားပြီး အထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့မှာ အနက်ရောင်များကို ၀တ်ဆင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ စုံတွဲမရှိကြတဲ့သူတွေကို ဒီနေ့လေးမှာ အနက်ရောင်ဝတ်ပြီး ချစ်သူရှာခိုင်းရင် ကောင်းမယ်နဲံတူတယ်နော်။ :)
မေလ (၁၄)ရက်နေ့ (Rose Day and Yellow Day)
ဒီလမှာတော့ Rose Day and Yellow Dayဆိုပြီး နှစ်ရက်ရှိပါတယ်။ နှင်းဆီများနေ့မှာတော့ ချစ်သူစုံတွဲတွေ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နှင်းဆီပန်းလက်ဆောင်ပေးကြပါတယ်။ အဝါရောင်နေ့လေးမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လက ပဲခေါက်ဆွဲ မစားရတဲ့သူတွေ အဝါရောင်ထမင်းစားကြတာပါတဲ့. ဘာကြောင့်ဆိုတာတော့ သိပ်နားမလည်ပါဘူး။ ဓါတ်ပုံတော့ ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဇွန်လ (၁၄)ရက်နေ့ (Kiss Day)
အနမ်းများနေ့တဲ့။ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုအရတော့ ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့၊သိတဲ့ ကိုယ့်အသိအားလုံးကိုနမ်းကြပါတယ်။
ဇူလိုင်လ (၁၄)ရက်နေ(Silver Day)
ချစ်သူစုံတွဲတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဒီနေ့မှာ ငွေထည်လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
သြဂုတ်လ (၁၄)ရက်နေ့ (Green Day/ Music Day)
ဒီလမှာလည်း Green Day and Music Dayဆိုပြီး နှစ်ရက်ရှိပါတယ်။ အစိမ်းရောင်နေ့မှာတော့ ချစ်သူစုံတွဲတွေသဘာဝအလှအပများရှိရာနေရာလေးတွေကို အလည်အပတ်သွားပြီးသာယာစွာဒီနေ့ရက်ကိုကုန်ဆုံးကြပါတယ်။ Music Dayအနေနဲ့ကတော့ သီချင်းပေးတာတို့၊ သီချင်းခွေပေးတာတို့ လုပ်ကြပါတယ်တဲ့။ live showတွေ၊ music concertတွေလည်း သွားလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့ (Photo Day)
ချစ်သူတွေအချင်းချင်း အဲဒီနေ့မှာ ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ကြမှာပေါ့။
အောက်တိုဘာလ (၁၄)ရက်နေ့ (Wine Day)
ဒီနေ့မှာ ကိုယ်ချစသူနဲ့ ၀ိုင်အတူတူသောက်ပြီး ချစ်ကြည်နူးကြတဲ့နေ့လေးပါ။ Itlian Food & Red Wine ဆိုမိုက်မယ်နော်။ :)
နိုဝင်ဘာလ(၁၄)ရက်နေ့ (Movie Day)
ဒီနေ့မှာတော့ ချစ်သူစုံတွဲတွေ အချစ်ဇာတ်လမ်းလှလှလေးတွေအတူတူသွားကြည့်ကြတဲ့နေ့ပါ။
ဒီဇင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့ (Hug Day/ Money Day)
အလွန်အေးတဲ့ရာသီ~~~ အလွန်ချမ်းတဲ့ရာသီ~~~ မောင်တစ်ရွာ မယ်တစ်မြို့တော့ နေလို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါပြီ~~~တဲ့ ။ ဒီဇင်ဘာလမှာ ကိုယ့်ချစ်သူကို နွေးနွေးထွေးထွေး ကြင်ကြင်နာနာ ပွေ့ဖက်တယ်ပေါ့ကွယ်။ Money Day အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို တန်ဖိုးကြီးကြီး လက်ဆောင်ပေးကြပါတယ်တဲ့။
ကဲ.... လစဉ် (၁၄)ရက် အထိမ်းအမှတ်လေးတွေတော့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့.... ဒီချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေက ဟိုနေ့မှလုပ်ရမယ်။ ဒီနေ့မှ လုပ်ရမယ်.... ဒါပေးရမယ်။ ဟိုဟာ မပေးရဘူး... ဒါလုပ်ရမယ်။ ဟိူဟာမလုပ်ရဘူး.... အဲလိုမျိုးကြီးတော့ မရှိ(သင့်)ဘူးထင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို နားလည်ပေးပြီး အပြန်အလှန် တန်ဖိုးထား ချစ်ခင်ဖို့ပါပဲ။
14 Feb, 2011 9:53 AM
Posted by witch83 at 7:47 AM 1 comment:
Labels: ဘာသာပြန်, အချစ်, ရေးမိသမျှ